राती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती, जसले कल्पना पनि ग’रिनन् यस्तो होला भन्ने ! पूरा पढ्नु होस – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > राती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती, जसले कल्पना पनि ग’रिनन् यस्तो होला भन्ने ! पूरा पढ्नु होस
admin October 10, 2020 October 10, 2020 जीवनशैली, समाज	0
एक १९ वर्षकी कि’शोरीले दा’वी गरेकी छिन् कि जब उनी रातमा एक युवकको कोठामा गइन् त्यही बेला अ’चानक युवकका अन्य ११ जना साथीहरु आए र सबैले क’रणी गरे । घ’टना साइप्रसको हो,जहाँ बेलायती क’शोरी एक सस्तो रिसोर्टमा बसेकी थिइन् । कि’शोरीले आफू एक युव’कसँग कोठामा भएको स्वीकार गरेकी छिन् । कि’शोरीको उ’जुरीपछि सबै १२ जना युवक विरुद्ध क’र णीको मु’द्दा चलाइएको छ ।
आ’रोपी सबै युवकहरु इज रायलका हुन् । किशोरी का अनुसार ती युवकहरुले उनी बे’होस भएपछि मात्र छोडेका थिए । किशोरीको श’रीरमा चो’टका कैयौं निशान पाइएका छन् । कि’शोरी साइप्रसको अयी नपा शहरमा पेम्बोस नपा रक्स होटलमा बसेकी थिइन् । घ’टना होटलको दोस्रो तलाको त्यो कोठामा भयो जहाँ इजराय ली युवक आफ्ना दुई साथीहरुसँग बसेका थिए ।
किशोरीका अनुसार रातको १ बजेसम्म ती युवकहरुले उनलाई छोडेनन् । किशोरीका अनुसार उनले आफूसँग सुरुमा भएका युवकसँग भने शा’रीरिक स\_म्बन्ध बनाइसकेकि थिइन् । पुलिसले सबै युवकहरुलाई प’क्राउ गरेको छ । युवकहरु लाई बिहीबार अदालतमा पेश गरियो । पुलिसले डिएन ए को जाँच रिपोर्ट पर्खिरहेको छ । स्थानीय मिडियामा एक युवक र पी’डित युवतीको इन्स्टाग्राम म्यासेज पनि प्रकाशित गरिएको छ ।
ब’ला’त्का’र हुनबाट बचाउने पे’न्टी
भारतकी एक युवतीले यस्तो पे’न्टी बनाएकी छिन्, जसले युवतीहरुलाई ब’लात्का’रबाट ब’चाउन सक्छ । १९ वर्षकी सीनू कुमारी उत्तर प्रदेशको र्फरुखाबाद जिल्लाको एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका हुन् । उनले बनाएको ‘रे’प प्रुफ पे’न्टी’मा एक प्रकारको लग लागेको हुन्छ, जसले ब’लात्का’र बाट बचाउनसक्छ ।
ब्ले’ड प्रु’फ कपडा प्रयोग गरिएको छ, जसलाई का’ट्न वा जलाउन सकिँदैन । साथै स्मार्ट ल’क, जीपीआरएस र एक रेकर्डर पनि छ ।स्मार्ट कल पासवर्डले मात्र खुल्नेछ । सीनू भन्छिन्, ‘यसमा एउटा बटम छ, जसलाई थिच्नासाथ इ’मर्जेन्सी वा १० नम्बर डायल हुनेछ ।’
धेरैलाई माल्टा पठाइदिन्छु भन्दै नगद ४८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ ठगी गर्ने यिनै हुन्!